Ithegi: umhlambi | Martech Zone
Kukho iincwadi ezimbalwa endizifundileyo ezinefuthe kwindlela endiziva ngayo malunga ne-Intanethi kunye nentengiso iyonke. Enye yeencwadi yayinguMark Earl's Herd: Ungayitshintsha njani indlela yokuziphatha kweMisa ngokubopha indalo yethu yokwenyani kwaye enye yayizizizwe zikaThixo: Sifuna ukuba usikhokele. Uninzi lwentetho yemihlambi kunye nezizwe zilungile kakhulu… iinkokheli zaxoxa (njengevidiyo kaTED kaThixo)
NgeCawa, ngo-Novemba 4, 2007 NgoMvulo, Februwari 8, 2016 Douglas Karr
Umxholo wam kule ndawo bekukhanya kancinci kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo- izakuthatha kungekudala. Bendihleli ndifunda kakhulu, ndithetha kwaye ndisebenza kwinyanga ephelileyo kwaye ichaphazela ibhlog. Nangona umxholo uphantsi ngoku, ingqondo yam ibaleka nomxholo kwezi veki zimbalwa zizayo, ke qiniseka ukunamathela kum. Ukuba akonelanga, ndivale umxhasi wokugqibela we-1,000 XNUMX yokunikezelwa
NgoLwesibini, Agasti 21, 2007 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Incwadi kaMark Earl, uHerd, ibinzima ekufundeni kum. Sukuyithatha ngendlela engeyiyo. Yincwadi emangalisayo endiyifumene kwibhlog kaHugh McLeod. Ndithi 'kunzima' kuba ayisiyiyo imbono yeenyawo ezingama-10,000. Umhlambi (Ungayitshintsha njani indlela yokuziphatha kwabantu abaninzi ngokubambelela kubume bethu bokwenyani) yincwadi entsonkothileyo eneenkcukacha ezininzi zezifundo kunye nedatha yokuza nesiseko sayo. Kananjalo, uMark Earls akakho